Dr. Tint Swe's Writings: လယ်စောင့်တဲလေးမှာ နေပါတယ်
အင်ဒီယာနာပုလစ်မြို့မှာ ၂ဝ၁၄ ကုန်ခါနီးကစပြီး နေပါတယ်။
လယ်စောင့်တဲလေးကဗျာကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ပေးပါလို့လည်း မေးတယ်။ တခါတခါ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်မှ လွဲတာဖြစ်တတ်တယ်။
ရေထဲမှာ ကြာပင်တွေ ရှိတယ်။ ကြာနီတပွင့် ဖြူတပွင့် တဲနဲ့ ပနံတင့်။ ကဇွန်းပင်ကတော့ ရှိမှာသေချာတယ်။ အရိုးနီ အရိုးစိမ်း အရွက်ဖါး ရေကစွန်း။
လယ်ကန်သင်းဘေးမှာ ကတွတ်ပေါက်က ထွက်လာမဲ့ ငါးတို့ ဗုဇွန် (ပုစွန်) လုံးတို့ကို ဗျိုင်းတွေက စောင့်နေကြတယ်။ တချို့ငှက်လေးတွေက လေဆန်မှာ ပျံနေကြတယ်။ လေကလည်း တသုန်သုန်ဖြူးနေတယ်။ အဲလို လယ်တောနံ့ဆိုတာ မြို့တွေမှာ မရှိပါ။ လယ်စောင့်တဲမှာ တံခါးမရှိပါ။ ခနော်ခနဲ့ လှေကားရှိတယ်။ ဓါတ်လှေကား မဟုတ်ပါ။ ပိုင်သူနဲ့ ထိုင်သူတွေက သမ္မာအာဇီဝလုပ်ကြတယ်။
ငယ်ငယ်က လယ်စောင့်တဲလေးမှာ စားရတဲ့ ထမင်းကြမ်းနဲ့ ရေနွေးကြမ်း လွမ်းပါတယ်။ ဆရာမင်းသုဝဏ်ရဲ့ကဗျာတွေကို သတ်ပုံဖျက်ရေးကြသူတွေလည်း နေကောင်းကြပါစေ။
Coronavirus News Update ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အပ်ဒိတ...
Wuhan Coronavirus တရုပ်ကလာတဲ့ ကူးစက်ရောဂါစာများ
အဆင့် ၁၉၀ က တက်နိုင်အောင်
Myanmar Hieroglyphs အရုပ်စာခေတ်သို့ ပြန်လည်ရောက်လာ...
Coronavirus Check-in ကိုရိုနာ မြန်မာပြည်ရောက်ပြီ
Slow Heart Rate နှလုံးခုန်နှေးခြင်း
Wuhan News ဒီသတင်းမှန်ပါသလားဆရာ
Lair လိမ်တဲ့သူတွေအတော်ပေါတယ် ယုံတဲ့သူတွေအတော်များတ...
Quarantine တရုပ်အမျိုးသမီးဘောလုံးသင်း သီးခြားထားမည...
Tees January သီးစ် ဇန္နဝါရီ
Coronavirus ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် နောက်တိုးသတင်း
အမောင်ပြောက်ကျား ချစ်သူအားကို ဘာများမှာခဲ့လိုသနည်း...
မဟုတ်ပါ စာဖတ်ရင် သိမယ်
Do No Harm စေတနာမှာ ပညာမပါရင် ဒုက္ခပေးတယ်
Black Death ကမ္ဘာ့အဆိုးဆုံး ရောဂါကပ်ကြီး
How to Stay Safe from Wuhan Virus ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်...
Face Mask နှာခေါင်းစည်း
White-Collar vs. Blue-Collar Jobs ပညာရှင်
China coronavirus outbreak means the world is once...
Common Cold Babies ကလေးတွေ နှာစေး အအေးမိရင်
Books ခဲစာလုံးခေတ်နဲ့ ဖုန်းခေတ်
Australia Day သြစတေးလျနေ့
Surgical Face Mask ဆေးရုံသုံး နှာခေါင်းစည်း
Name Change Politics ဝေါဟာရနိုင်ငံရေးစာများ
ကျေညာ ကြော်ငြာ ကြေညာ ကြော်ညာ
Skype Interview အိုင်စီဂျေအရေး
Coronavirus ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် သတင်းအဆက်
Coronavirus ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် သတင်းအဆက်
Email and Comment အီးမေးလ် ရေးနည်း
BI-RADS ရင်သားကို မင်မိုဂမ်ရိုက်ရင်
Innocent Humor အပြစ်ကင်းတဲ့ ဟာသ
အိပ်ယာ အိပ်ရာ ကြင်ယာ ကြင်ရာ
A1C (HbA1c) test ဆီးချိုအတွက်
Gandaria မရမ်းသီး မရန်းသီး
World Time Zones လူကြီးမင်းတို့ကစောပြီး ကျွန်တော်တ...
Money Machine Hospital အကြံအဖန်လို့ ယူဆ
Returning Home ပြည်တော်ပြန် ဖိတ်ခေါ်ချက်အပေါ် သဘောထာ...
Common Cold in babies ကလေးတွေ အအေးမိရင်
တကျပ်မှာ တမတ်လောက် ကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်
Cervical Polyps သားအိမ်ဝ အသားပို
Cough Links ချောင်းဆိုး စာများ
Herpes Simplex ရိုးရိုး ရေယုံ
Coronavirus: Wuhan to shut public transport over o...
Literary Modernism မော်ဒန်လွန် မြန်မာစာ
Immune discovery may treat all cancer တွေရှိချက်သစ...
Wuhan virus found in US
Piles Q and A လိပ်ခေါင်းရောဂါ အမေး-အဖြေများ
Medicines for Money ကြော်ငြာနဲ့ရန်ဖြစ်နေရတဲ့ ဆရာဝန...
Hormones in Meat and Dairy အသားတွေထဲပါနေတဲ့ ဟော်မု...
Bleeding During Early Pregnancy ကိုယ်ဝန်နုစဉ် သွေး...
Miscarriage အလိုလို ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်း
Fibroids and Ovarian Cysts သားအိမ်အလုံး မျိုးဥအိမ်...
Privacy ပုံပို့ခြင်း စည်းကမ်း
Liver Links ဘလော့ခ် အသစ်ထဲမှ အသည်းရောဂါ လင့်ခ်များ...